टेररिस्ट : एक अप्रिय अनुभूति - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
टेररिस्ट : एक अप्रिय अनुभूति
‘तपाईं नारीवादी टेररिस्ट हो ?’
हो, यही वाक्य प्रयोग गर्नु भयो पत्रकार किशोर नेपाल दाइले । म एकछिन रनभुल्लमा परेकी थिएँ । मैले नारीवादी टेररिस्ट भन्ने शब्द पहिलो पटक सुन्दै थिएँ । मैले स्पष्ट हुन सोधेँ, ‘के भन्न खोज्नुभएको दाइले ? के हो नारीवादी टेररिस्ट भनेको ? खै दाइ, मैले त आजसम्म कतै कहीँ प्रयोग भएको सुनेकै छैन यो शब्द ।’ मैले जवाफदिएँ, ‘हो, म महिला हुँ । महिलाहरूको इस्युमा संवेदनशील नारीवादी हुँ । झापाली पनि हुँ, तर तपाईंले सोचेजस्तो टेररिस्टचाहिँ कदापि होइन ।’
गत असार ३ गते शुक्रबार कान्तिपुर प्रकाशन गृहको ‘साप्ताहिक’ मा मसितको कुराकानीमा आधारित उहाँको आलेख प्रकाशित भयो । प्रकाशनसँगै विवाद पनि ओइरियो । विवाद अरू कुनै कुरामा छँदै थिएन, तर उक्त आलेखको शीर्षकलाई लिएर मेरा केही अत्यन्त नजिकका साहित्यिक मित्रहरूले तीखो गुनासो गर्नुभयो । उक्त कुराकानी ‘साप्ताहिक’ का युवा पाठकका लागि भएकाले त्यसमा मैले गम्भीर विमर्शको आशा पनि गरिनँ । आलेखभित्र किशोर दाइले अरू जे लेख्नु भयो, त्यसमा मेरो केही गुनासो छैन । शीर्षकको हकमा सुरुमा म पनि शब्दभित्रको शाब्दिक आशयमा पसिनँ र भावार्थमा ग्रहण गर्दा मैले त्यसलाई ठूलो इस्यू बनाइहाल्नुपर्ने विषय मानिनँ । त्यसैले मैले फेसबुकमा उक्त आलेख सधन्यवाद सेयर गरेँ । मलाई शीर्षकमा राखिएको टेररिस्ट भन्ने शब्दले यति ठूलो बबन्डर खडा गर्छ जस्तो लागेको पनि थिएन, तर कुरा उठेपछि भने मलाई पनि किशोर दाइले त्यस्तो शीर्षक नराखिदिएको भएहुन्थ्यो भन्ने लाग्यो ।
मैले नारीवादको सिद्धान्त र यससम्बन्धी भारीभरकम ग्रन्थावलीहरू पढेर नारी केन्द्रित विषयमा लेख्न थालेको होइन । मैले आफ्नै तौरतरिकाले समाजमा विद्यमान नारीका समस्याहरू बुझेकी छु । धेरै कुरा आफैंले भोगेकी पनि छु । व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा नारीवादीका कतिपय प्रखर समर्थक देखिनुभएका आदरणीय अभियन्ताहरूले देख्नुभएको समस्याभन्दा नारी भएकै कारणले मैले भोगेका समस्या भयावह होलान् । ती पनि कुनै बेला लेखिएलान्, तर हाललाई मेरो टाउको किशोर दाइले लेखिदिनुभएको टेररिस्ट शब्दको ‘आतंकवाद’ले आहत भएको छ ।
टेररिस्ट शब्द किशोर दाइको प्रश्नमा आएर मेरो भाखामा नआएको भए यो विवाद हुने थिएन, तर लेखमा उहाँको प्रश्न गायब भयो र मेरो उत्तर शेष रह्यो । उक्त शब्द मैले भनेजस्तो भएर आयो । अहिले लाग्छ, किशोर दाइजस्तो वरिष्ठ पत्रकारले मजस्तो अदना लेखकको विचारलाई प्रस्तुत गरिदिँदा कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेक्का राखिदिनुभएको भए म यो विवादमा फस्ने थिइनँ । म अनावश्यक विवाद रुचाउने मान्छे होइन । शान्त किसिमले आफ्ना भावनालाई साहित्यमार्फत अभिव्यक्त गर्न रुचाउने सिकारु लेखक हुँ । त्यसैले यस्ता शब्दहरूका कारण मैले झेल्नुपरेको आरोपले आज मलाई बिथोलेको छ । विवादमा रमाउने बानी परेको भए मेरा लागि यी सामान्य कुरा हुन्थे होलान् ।
नारीले भोगिरहेका लैंगिक विभेद र त्यसकै कारण नारीको जीवनमा सिर्जना भएका भयावह समस्यालाई आफ्नो लेखनको केन्द्र बनाइरहनुभएका तमाम लेखकलाई टेररिस्ट भनिदिँदा पक्कै उनीहरूले बोकेर हिँडिरहेको मुद्दाप्रति चरम व्यंग्य गरेको मानिन्छ । नारीवाद नारीले मात्र बोकेर हिँडिरहनुपर्ने विषय होइन, किनभने यो समस्त मानवतासित जोडिएको कुरा हो । त्यसैले यसमा सचेत पुरुषको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, तर हामी पुरुष लेखकहरूबाट असल नियतको आशा राख्छौँ, उसले नारीवादी स्वरलाई टेररिस्ट भनिदिँदा हाम्रो पुरुषप्रधान समाजको एक खालको पतनशील छवि मेरो सामु स्पष्ट भएर आएको अनुभूत भएको छ मलाई ।
टेररिस्ट खालकी नारीवादी होइन
अभिनेता किसन सुनारको लभमन्त्र
महिला र पुरुषबीच चाहिने पाकक्रीडा
भ्यालेन्टाइन लागेपछि प्रेम गर्ने मुड झनै बढ्छ रे हो ?